Amabhonasi "Ngiyabonga kusukela Savings Bank." Lapho ukuchitha?
Kukhona Okwamanje ngenkuthalo ekuthuthukiseni Uhlelo lokuthembeka "Siyabonga kusukela Savings Bank." Lapho ukuchitha amaphuzu zanqwabelana, futhi kusebenza kanjani? Ukuze iqhaza kuhlelo can umnikazi ubani Sberbank ikhadi anoma yiluphi uhlobo. Ikakhulukazi abanikazi lucky imikhiqizo eziningana yasebhange. Bazokwazi ukuthola inzuzo double. Njengoba ibhonasi izofakwa kwi-akhawunti eyodwa ukuze ukhokhele izimpahla noma amasevisi ezifana debit nama-credit card. Ngenxa yalokho amaklayenti Savings Bank uthole izaphulelo kuhle ku ukuthenga, futhi kwezinye izitolo umlingani yobukhulu bawo ifinyelela 99%.
Ingabe kuwusizo ukubamba iqhaza kuhlelo lwe ibhonasi ekuqongeleleni?
Badinga ukwazi ilungu ngalinye iphrojekthi "Ngiyabonga kusukela Savings Bank"? Lapho ukuchitha amaphuzu zanqwabelana futhi nanzuzoni-ke uzothola. Nasi uhlu izinzuzo zohlelo ibhonasi.
abahlanganyeli Project akudingeki ukukhokha noma yiziphi izimali emnyango, wena nje kufanele ubhalise (kuthatha iminithi).
Omunye ibhonasi imali okulingana ilingana komunye RUB.
amaphuzu zanqwabelana angazithola for isaphulelo, nganoma yingasiphi embulungeni yethu.
Amabhonasi uya ngokuthenga (0.5% ngalinye), uzibophezele kunoma yiliphi izwe.
Ukuze uthole ibhonasi akunasidingo esinye isenzo, ngaphandle Sberbank imikhiqizo lekhadi.
Uma wenza ukuthenga kwelinye izitolo umlingani, ungakwazi ukuthola inombolo enkulu amabhonasi.
Indlela uqale iqhaza kuhlelo?
Ngakho, usuthathe isinqumo ukuze bajoyine "Siyabonga kusukela Savings Bank." Lapho ukuchitha amaphuzu zanqwabelana - ungakabi yanquma, nendlela ukuxhuma isevisi - Angazi. Ngeshwa, kokuthola ikhadi Savings Bank ngeke ngokuzenzekelayo ziba ilungu uhlelo ibhonasi ngeke zisebenze. Ukuze amaphuzu waqala buthelela akhawunti, kuzomele udale i-akhawunti. Kwenze kungenzeka ngokusebenzisa i-ATM, intanethi noma yasebhange mobile.
Eminyakeni emibili indlela ayikwazi ukusetshenziswa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi namasevisi 'Banking Inthanethi "noma" Mobile Banking ". Ngakho okokuqala kufanele ukuxhuma kubo. Ngakho-ke, ugcwalise ifomu kuyinto elula nge iyiphi i-ATM eliseduze. Odinga ukukwenza - kuyinto ukufaka ikhadi, ufake inombolo pin imfihlo, inombolo yeselula futhi ngivumelana iqhaza kuhlelo ibhonasi "Siyabonga kusukela Savings Bank." Lapho ukuchitha amaphuzu zanqwabelana ngesikhathi unquma.
Njengoba isiqinisekiso ukubhaliswa yimpumelelo ocingweni uzothola umlayezo oqukethe iphasiwedi yakho. Kuzodingeka uma isikhalazo ukusiza isevisi yasebhange ukuthola inani lamaphuzu zanqwabelana noma olunye ulwazi lwemvelo siqu.
Khumbula ukuthi uma une amakhadi amaningi kudingeka kudlule yokubhalisa ngayinye.
Lapho ungachitha amabhonasi "Ngiyabonga" kusukela Savings Bank?
Kunezindawo eziningi kakade exhunywe ohlelweni ibhonasi. abalingani Sberbank yilezi: "Wezingane Umhlaba», Tervolina, «Bronnitsky ngamagugu», BAON. Kanye ezitolo inthanethi: Lamoda, Ozon, «Sotmarket" kanye nabanye abaningi.
Ukube omunye umlingani izitolo zohlelo ngomusa bayacelwa ukuba azise u-cashier ukuthi uyangena ukukhokhela amaphuzu izimpahla noma ukuzisebenzisa njengoba isaphulelo. Kuyinto phakathi abalingani zohlelo ngokuya okuyinto amabhonasi "Ngiyabonga Sberbank», Webmoney. Kule ndaba amaphuzu okungatholakala wachitha ezitolo inthanethi ukuthi bamukele imali electronic kusukela ohlelweni. ukhethe "ngiyabonga" ibhonasi salokhu phakathi kwenqubo ukuhleleka kuka kumelwe ibe phakathi kwezokuqala ukuba izindlela zokukhokha.
Qaphela: amaphuzu ibhonasi ngokuqinisekile uyozishisa up, uma phakathi nonyaka ayenzi lasebhange ukuthengiselana. Ngakho shesha ukuchitha isikhathi sabo!
Udinga iloli donsa? Vele ushayele!
Asiwona umdlalo wethelevishini "Ekugcineni Magikyan": nabalingisi izindima, sakhiwo isifinyezo